သတင်း - Candle Tunneling ကို ဘယ်လိုပြင်ဆင်ပြီး တားဆီးမလဲ။
Candle tunneling သည် ကွန်တိန်နာ၏ အစွန်းတစ်ဝိုက်တွင် ဖယောင်းအထစ်များ မပျော်မရွှင်ဘဲ ဖယောင်းတိုင်၏ အလယ်ဗဟိုတွင် ထွန်းညှိထားသော ဖယောင်းတိုင်အရည်ပျော်ခြင်း၏ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မီးဖိုပေါ်ရှိ မီးတောက်သည် တောက်လောင်နေချိန်တွင် အောက်ခြေဘက်သို့ ဒေါင်လိုက် “ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း” ကို ဖန်တီးပေးကာ ဘေးနှစ်ဖက်ပတ်လည်တွင် ဖယောင်းများစွာ ကျန်ရစ်သည်။
ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ လှိုင်ခေါင်းပေါက်ထားသော ဖယောင်းတိုင်များကို ပြုပြင်ရန် သင်သုံးနိုင်သော လှည့်ကွက်အနည်းငယ်ရှိသော်လည်း အကောင်းဆုံးဆေးမှာ ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည် ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအတွင်း ဖယောင်းတိုင်တစ်တိုင်ကို ချန်ထားခဲ့ပါက တစ်ခါတစ်ရံတွင် ကျန်ဖယောင်းများကို ပြုပြင်ကာ အရည်ပျော်သွားတတ်သော်လည်း အများစုမှာ ကွန်တိန်နာ၏ ပတ်၀န်းကျင်တစ်ဝိုက်တွင် အမြဲတမ်း ဖယောင်းအခဲအဝိုင်းတစ်ခု ကျန်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။
ဖယောင်းကို အလဟသ မဖြစ်စေရန် အမြန်လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ကြာကြာစောင့်လေ၊ ပြင်ရခက်လေဖြစ်သည်။
ဖယောင်းတိုင်တစ်ခုသည် ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းသို့ ဆက်သွားပါက၊
l အောက်ဆီဂျင်ကုန်သွားလျှင် သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ဖယောင်းများ အရည်ပျော်ပြီး မီးနစ်သွားပါက သူ့အလိုလို လောင်ကျွမ်းသွားခြင်း သို့မဟုတ်၊
l မီးလောင်မှု ပြီးဆုံးသော်လည်း ဖယောင်းတိုင်ကို စားသုံးခြင်းမပြုဘဲ ဖယောင်းတိုင်အတွက် လောင်ကျွမ်းချိန် သိသိသာသာ တိုတောင်းစေသည်။
ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းဖောက်ခြင်းကို ရပ်တန့်ရန် အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းမှာ ပထမနေရာတွင် မဖြစ်ပေါ်အောင် တားဆီးရန်ဖြစ်သော်လည်း လက်ထဲမှ လွတ်သွားပါက ပြုပြင်ရန် ဖြစ်နိုင်သည်။
ဥမင်လှိုဏ်ခေါင်းကို ဘယ်အရာက ဖြစ်စေတာလဲ။
ဥမင်လှိုဏ်ခေါင်းကို စတင်မရအောင် ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ။
သင်အကြိုက်ဆုံး ဖယောင်းတိုင်များပေါ်တွင် ဥမင်လှိုဏ်ခေါင်းကို သင်မည်ကဲ့သို့ ပြင်ဆင်နိုင်မည်နည်း။
ဖယောင်းတိုင်တူးခြင်း (candle tunneling) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ဖယောင်းတိုင်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းဖောက်ခြင်းကို ခွဲခြားသိမြင်ရန် လွယ်ကူသည်မှာ ၎င်းတွင်ကျန်ခဲ့သော “ထစ်” လက္ခဏာကြောင့် ဖြစ်သည်။
ဖယောင်းတိုင်များတူးခြင်းအတွက် အဓိကတရားခံ နှစ်ဦးရှိသည်။
ဖယောင်းမှတ်ဉာဏ်ကို နားလည်ရန် ဖယောင်းတိုင်တစ်တိုင်၏ ဘဝစက်ဝန်းအတွင်း ဖြစ်ပျက်နေသည့်အရာများကို ဆွေးနွေးရန် လိုအပ်သည်။ ဖယောင်းတိုင်တွေ အရည်ပျော်သွားတဲ့အခါ အရည်ဖြစ်သွားပါတယ်။
သို့သော် အစိုင်အခဲအဖြစ်သို့ ပြန်အေးလာသောအခါ မီးဖိုကို မီးမထွန်းမီကကဲ့သို့ “ခဲ” သည်မဟုတ်။ ဖယောင်းပေါ် မူတည်၍ မီးဖိုမမီးမညှိမီ ရက်အနည်းငယ် သို့မဟုတ် နှစ်ပတ်ခန့်ကြာနိုင်သည်။
ဆိုလိုသည်မှာ လတ်ဆတ်သော အရည်ကျိုထားသော ဖယောင်းသည် ပိုမိုပျော့ပျောင်းပြီး အရည်အဖြစ် တစ်ဖန်ပြန်အရည်ပျော်ရန် အပူပိုနည်းသည်။
မီးဖိုကို ပြန်မီးလင်းသောအခါ၊ ယခင် အရည်ကျိုထားသော ဧရိယာသည် ပထမ အရည်ပျော်သွားပြီး ကျန်ဖယောင်းထက် များစွာ ပိုမြန်ပါသည်။
ဖယောင်းမှတ်ဉာဏ်သည် မူလမာကျောမှုကို ပြန်မအေးစေသောကြောင့် ကျန်ဖယောင်းတိုင်များထက် ပိုမိုလျင်မြန်စွာ အရည်ပျော်သည့် ဖယောင်းတိုင်၏ ဧရိယာဖြစ်သည်။
ဖယောင်းတိုင်၏ အပြင်ဘက်ကွင်းကို အရည်ပျော်ရန် အချိန်လုံလောက်စွာ မပေးပါက၊ ၎င်း၏ မှတ်ဉာဏ်ကို တိုးလာစေမည်ဆိုလျှင်၊ မီးလျှံသည် အပြင်ဘက်လက်စွပ်ကို လုံးဝ အရည်ပျော်ရန် မဖြစ်နိုင်သည့်တိုင်အောင် မီးစာသည် အောက်ဘက်သို့ လှိုဏ်ခေါင်းထဲသို့ စတင်ရောက်ရှိသွားမည်ဖြစ်သည်။ အရမ်းနည်းပါတယ်)။ ဖယောင်းတိုင်သည် အောက်ဆီဂျင်မကုန်မချင်း သို့မဟုတ် သင့်အိုးထဲတွင် မပျော်နိုင်သောဖယောင်းကွင်းကြီးတစ်ကွင်းကျန်နေချိန်အထိ ဖယောင်းတိုင်၏ အပျော့ဆုံးအစိတ်အပိုင်းကို ဆက်လက် အရည်ပျော်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ဖယောင်းမှတ်ဉာဏ်မှ ဖယောင်းတိုင်တူးခြင်းသည် ဖယောင်းတိုင်ပိုင်ရှင်၏ ညံ့ဖျင်းသော လောင်ကျွမ်းသည့် အပြုအမူများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
ဖယောင်းတိုင်ဖန်တီးသူများသည် မှန်ကန်သောမီးခြစ်ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည် ဖယောင်းတိုင်ဒီဇိုင်းအတွက် အရေးကြီးဆုံးအရာဖြစ်သည်ကို သိကြသည်။
ဖယောင်းတိုင်ရှိ အခြားအရာအားလုံးသည် တဟုန်ထိုး ဟစ်အော်နိုင်သော်လည်း မီးစာသည် မှန်ကန်သောအရွယ်အစားမဟုတ်ပါက အရေးမကြီးပါ။
ဖယောင်းမှတ်ဉာဏ်သည် မီးစာသည် ပြင်ပဖယောင်းကို အရည်ပျော်ရန် အခွင့်အလမ်းကို ရပ်တန့်စေသည်၊ သို့သော် သေးငယ်သော အရွယ်အစားမှာ မတတ်နိုင်ပေ။
ဖယောင်းတိုင်တစ်လုံးသည် အလွန်သေးငယ်သောအခါ ဖယောင်း၏ လုံလောက်သော ဧရိယာကို အရည်ပျော်ရန် လုံလောက်သော အပူကို မထုတ်ပေးနိုင်ပါ။ ဤအခြေအနေတွင် မီးဖိုသည် အရည်ပျော်နိုင်သကဲ့သို့ ကျယ်သောအပေါက်ထဲတွင် လောင်ကျွမ်းသွားမည်ဖြစ်သည်။
အမှန်တကယ်အေးသောအခန်းများသည်လည်း မှန်ကန်သောဖယောင်းပမာဏကို အရည်ပျော်ရန်ခက်ခဲစေသည်။ ဥပမာ၊ ဆောင်းရာသီမှာ အပြင်မှာ ဖယောင်းတိုင်တစ်တိုင် မီးရှို့ရင် ဖယောင်းတိုင်လိုဏ်ခေါင်းတိုင်းလိုလို တွေ့လိမ့်မယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် အအေးခန်းထဲတွင် အနားယူသည့်အခါ ပိုကြာသည့် အရည်ပျော်မှတ်သို့ မြှင့်တင်ရန် လိုအပ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ဖယောင်းတိုင်တစ်ခုတွင် မှားယွင်းနေသော မီးစာအရွယ်အစားရှိခြင်းအတွက် အစားထိုးစရာမရှိပါ။ ဖယောင်းတိုင်ကို မသင့်လျော်သော အရွယ်အစားရှိ ဖယောင်းတိုင်ပုံစံ ညံ့ဖျင်းမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများ မဖြစ်ပေါ်အောင် ကာကွယ်ရန် အဓိက ဗျူဟာသုံးရပ် ရှိပါသည်။
ပထမတစ်မျိုးမှာ သာမန်ဖယောင်းတိုင်များနှင့် သက်ဆိုင်ပြီး ဒုတိယတစ်မျိုးမှာ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းမဟုတ်သော ဖယောင်းတိုင်ကို ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရန် ကြိုးစားနေသည့် ဖယောင်းတိုင်ဖန်တီးသူများအတွက် ဖြစ်သည်။
1. ဖယောင်းတိုင်ကို အနည်းဆုံး3နာရီ မီးရှို့ပါ။
ခက်ခဲပြီး လျင်မြန်သော စည်းမျဉ်းတစ်ခု မဟုတ်သော်လည်း ဖယောင်းတိုင်သည် အရည်ပျော်ရန် အချိန်ရှိကြောင်း သေချာစေလိုပါသည်။ တခြားအရာတွေ မပျော်ခင် နက်နဲလွန်းရင် မီးက မျက်နှာပြင်ကို ကောင်းစွာ အရည်ပျော်ဖို့ အခွင့်မရှိသလို ပြဿနာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
အရာတွေ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ချက်ခြင်းငြှိမ်းသတ်ရမယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်ဖို့ ရံဖန်ရံခါ ဖယောင်းတိုင်မီးထွန်းပါ။ ရပါတယ်။ သို့သော် သင်သည် ဖယောင်းတိုင်ကို ၎င်း၏ပထမအကြိမ်အနည်းငယ်တွင် အနည်းဆုံး3နာရီမှ4နာရီအထိ လောင်ကျွမ်းရန် အခွင့်အရေးပေးကြောင်း သေချာပါစေ။ အလုံအလောက်ကြာအောင် မလောင်ကျွမ်းစေပါက ဖယောင်းမှတ်ဉာဏ်သည် သေးငယ်နေမည်ဖြစ်ပြီး သင့်ဖယောင်းတိုင်သည် ဥမင်လှိုဏ်ခေါင်းပေါက်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။
2. မှန်ကန်သော wick size ကိုသုံးပါ။
ဥမင်လှိုဏ်ခေါင်းတူးခြင်း၏ အခြားအဓိကအကြောင်းရင်းမှာ မသင့်လျော်သော မီးဖိုအရွယ်အစားဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည် ဖယောင်းတိုင်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါက၊ သင့်ဖယောင်းနှင့် ကွန်တိန်နာအတွက် မှန်ကန်သော wick အရွယ်အစားနှင့် စီးရီးကို ရွေးချယ်ရန် သင့်ဖယောင်းတိုင်များကို စမ်းသပ်နေကြောင်း သေချာပါစေ။ အမိုက်စား ဖယောင်းတိုင်ကို ဘယ်သူမှ မကြိုက်ပါဘူး။ သင့်ဖယောင်းတိုင်ဒီဇိုင်းသည် ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းဖြစ်နေပါက၊ နောက်တစ်ခုအတွက် သင့်မီးစာအရွယ်အစားကို တိုးမြှင့်လိုက်ပါ။ ၎င်းသည် ပုံမှန်အားဖြင့် သေးငယ်သော wick ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးသည်။ ပြီးတော့ burn test လုပ်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
Candle tunneling သည် တော်တော့်ကို အဖြစ်များသော ပြဿနာဖြစ်ပြီး များသောအားဖြင့် ဖြေရှင်းရန် အလွန်အမင်း အားစိုက်ထုတ်လေ့ မရှိပါ။ ဖယောင်းတွင် မှတ်ဉာဏ်များ ပါသော်လည်း၊ ကောင်းမွန်စွာ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ဖယောင်းတိုင်များသည် များသောအားဖြင့် ပြဿနာကို ပြုပြင်နိုင်သော်လည်း တစ်ခါတစ်ရံတွင် အရာများ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ပြင်းထန်စွာ အရေးယူရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဖယောင်းတိုင်ကို ငိုသည် သို့မဟုတ် လွှင့်ပစ်မည့်အစား ၎င်းထဲမှ လက်မှုပညာ ပရောဂျက်ငယ်တစ်ခုကို ဖန်တီးပြီး အထက်ဖော်ပြပါနည်းလမ်းများဖြင့် ၎င်းကို ပြန်လည်ရယူပါ။
သို့သော် အကောင်းဆုံးဆေးမှာ ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့် ဖယောင်းတိုင်အရည်ပျော်သွားစေရန် ပထမအကြိမ်အနည်းငယ်လောင်ကျွမ်းမှုအတွက် အနည်းဆုံး ၃ နာရီမှ ၄ နာရီအထိ ဖယောင်းတိုင်အသစ်များကို မီးရှို့ပါ။